के कारणले हुन्छ पिनास? यसबाट कसरी जोगिने ? | News Dainik | न्यूज दैनिक
News desk १६ श्रावण २०७६, बिहीबार ०९:३७ स्वास्थ्य प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । पटकपटक रुघाखोकी लागिरहने मानिसमा पिनास हुने सम्भावना बढेर जान्छ । धुलो, धुवाँ, तथा एलर्जीका कारण नाकमा हुने संक्रमणले पनि पिनासको जोखिम बढाउँछ। नाकको हड्डी बांगो हुनु पनि पिनासको प्रमुख कारण हो । हड्डी बांगो हुँदा सिँगान वा फोहोर पदार्थ जमेर बस्छ, जसले श्वासप्रश्वासमा समस्या पैदा गर्छ र पिनास हुन्छ।
लक्षण – पिनासको प्रारम्भिक लक्षण नाक बन्द हुने, टाउको र अनुहारको छेउछाउमा दुख्नु हो । बिस्तारै पिनासको संक्रमण बढ्दै गएमा ज्वरो आउने, आँखाको तल्लो भाग र जिउ दुख्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
पिनास भएमा बच्चामा पटकपटक रुघा लाग्ने र ज्वरो आउने हुन्छ। यसको उपचार समयमै नगरेमा नाकमा मासु पलाउने समस्या हुन सक्छ । बिस्तारै संक्रमण फैलँदै आँखामा पुगेमा पिप जम्ने तथा अन्य जटिल समस्या देखापर्न सक्छन्।
रोकथाम र उपचार – रुघाखोकी लागिरहेमा पिनास हुने भएकाले सकभर चिसोबाट बच्नुपर्छ । नाकमा हुने एलर्जीबाट जोगिनुपर्छ । भिटामिन सीयुक्त खानेकुरा र प्रशस्त पानी सेवन गरेमा पिनासबाट बच्न सकिन्छ। धुवाँ–धुलोबाट जोगिनुपर्छ । नाकमा समस्या देखिनेबित्तिकै चिकित्सकको सल्लाह लिएमा पिनास हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
सुरुवाती चरणमा एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोगबाट पिनासको उपचार गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नाक खुलाउन वा संक्रमण कम गर्न विभिन्न औषधिको प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी, नियमित बाफ लिएर पनि पिनास कम गर्न सकिन्छ।
अघिल्लॊ एक किलो सुनसहित थानकोटबाट एक जना पक्राउ
पछिल्लॊ शान्तिश्री परियारको शसक्त तीज गीत ‘फूलमती चनमती’ (भिडियो)